Soogalootiga madax ka ah xaruumaha dowladda hoose Stockholm oo aad u yar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soogalootiga madax ka ah xaruumaha dowladda hoose Stockholm oo aad u yar
Awad Hirsi "ha laga qaado caqabadaha xanibaya qofka ajenimiga ah"
La daabacay tisdag 16 april 2013 kl 12.29
Tobankii hal keliya ayaa asalkooda soogalooti yahay madaxda sare dowladda hose ee Stockholm Stad, halka dadka ku nool Stockholm ay boqolkii 25 asalkooda ka soojeedo soogalooti, sida ay asbuucaan qortey jariirada DN-Stockholm. Xisbiga Miljöpartiet ayaa hada dalbanaya in la kordhiyo tirada madaxda asalkooda soogalootiga yahay ee ka howl-gala Stockholm Stad. Awad Hersi waxuu golaha degmada Stockholm u fadhiyaa xisbiga Miljöpartiet.
- Waa arin aaan siyaabo faro badan u fiicneyn, kow waxaa jira dad faro badan oo howlshaa ka baxi kara oo aan dareemayo in aysan fursadaas helin. Mida labaad waxeyn noqoneysaa in Stockholm dadka madaxda ka ah ay yahiin dad gaaro un oo aan loo wado sineyn.
Madaxda xarumaha dowladda hoose ee Stockholm Stad ayaa isku geyn ah 1843 qof , tiradaas ayaa tobankii sagaal kamid ah yahiin kuwo dalka ku dhashey, ayada oo ay weliba madaxda ugu sarsareysaa ay ku yaryahiin dadyowga dalka dibadiisa ka soojeeda, sida ay qortey jariirada DN-Stockholm asbuucaan.
Awad Hirsi waxa uu aaminsanyahay in arintaas aheyn mid loo dulqaadan karo, waxa uuna u aaneynayaa sababta aysan degmada Stockholm ugu badaneyn madax sare ee asalkooda soogalootiga ka soo jeedo ay tahey in ay meesha ka maqan tahay dalab ka imaanaya siyaasiinta oo ah in arinkaas wax laga badalo oo tirada madaxda soogalootiga ah kor loo qaado iyo weliba xilliga ay qofka ku qaadaneyso in uu u dalaco ilaa madax sare oo aad u dheer.
Hirsi waxa uu doonayaa si arintaan wax looga qabto in Stockholm Stad ay ka hortagto cunsuriyada oo dadka aqoontooda iyo kartidooda lagu shaqaaleeyo, sidoo kalena ay magaalado balan qaado in ey sannad kasta shaqaaleysiineyso tiro tilmaaman oo ah madax asalkooda soogalooti yahay.
- Waxa ugu mahiimsan oo ay tahay in la eego marka la shaqaaleysiinyo qof madax ah in la eego aqoontiisa, waana in laga hortago waxii cunsuriyed ku shaqo leh. Stockholm waxey leedahey barnaamij loogu talo galey dadka madaxda noqon raba, marka waxaa rajeyneynaa dadka ajinabiga dhalasho ahaan ka soojeeda in halkaas lagu xoojiyo. Waxaanse rabnaa in Stockholm ay tiraahdo sannadyada soo socda boqolkiiba intaas oo qof oo ajinambi ka soojeeda ayaan shaqaaleyneynaa, taas marka la sameeyana la hirgeliyo. markaa waxaan filayaa in isbedel baa imaan doona, magaaladuna waxey noqon doontaa magaalo cid welibaa ay ka muuqato.
Ma la oran karaa marka adinka waxaad taageersan tahiin in kvotering lagu sameeyo ama si gooniya loo doorto qofka soogalootiga ah?
- May lamo oran karo laakiin waxaa la oran karaa in caqabadaha xanibaya qofka ajinamiga ah in laga qaado. Waxaa jira dad aad iyo aad aqoontooda u sareyso, dadaalkoodana u fiicanyahay. Marka hadii caqabahada laga qaado ayaga un baa muujinaya in kartidaas leeyahiin, waano ku guuleysanayaan.